Home / Interior design / Toerana atsinanana mahay mandanjalanja sy milamina miaraka amin'ny haben'ny rivotra sy ny gadona│Fandinihana an'i Milo
2021 / 05 / 25 FisokajianaInterior design 6192 0
Ny fahaizan'ny mindrana sy ny marim-pototry ny vatana dia mety
Chenzhou dia fantatra amin'ny anarana hoe "vavahady atsimo" any Hunan. Ny teny hoe "Chen" dia an'i Chenzhou irery, izay fitambaran'ny teny hoe "ala" sy "eup", izay midika hoe "tanàna ao anaty ala". Izy io dia manana toerana voajanahary mahatalanjona mahatalanjona sy tantaran'ny olombelona. Io no iray amin'ireo tanàna manan-tantara sy ara-kolotsaina voalohany any Hunan ary iray amin'ireo toerana nahaterahan'ny kolontsaina sinoa. Nanomboka tamin'ny Fanjakan'i Qin izy io ary nantsoina hoe County Chen.
Ny foiben'ny varotra Wanteng-Guanshan Yue dia miorina ao amin'ny faritry ny tanànan'ny Chenzhou. Ilay mpamolavola, izay nihalehibe teto hatramin'ny fahazazany, dia nampifangaro ny fahalalany ireo singa ara-kolontsaina ao an-toerana ao Chenzhou miaraka amin'ny filozofia famolavolana azy manokana hamolavolana sehatra toe-tsaina tatsinanana feno fahatsiarovana ara-kolontsaina, fifandanjana ary filaminana.
Ny famolavolana fanaka malefaka dia tsy ny fandaminana ny fanaka, ny loko, ny voninkazo ary ny hazo, ny tsipika sy ny kojakoja ihany, fa ny fandanjalanjana ny maha-olona, ​​ny natiora ary ny gadona ary ny fitaovam-pandraisana ny fihetsem-po sy ny fitadidian'ny olombelona. Ny mpamorona dia manaraka ny fanahin'ny famolavolana ny "mahay mandanjalanja, voadio amin'ny vatana mety", maka ny toeran'ny tetikasa sy ny sehatra manodidina ho loharanon'ny aingam-panahy, mampanjavozavo ny fetra eo anelanelan'ny anatiny sy ivelany, ary mijery ny fandanjalanjana sy ny filaharan'ny maritrano, haingon-trano malefaka, lanitra, tany, tendrombohitra, rano ary singa ao anaty ala.
Ny faritra fifampiraharahana dia mavitrika sy mahaliana, miaraka amin'ny loko kanto. Ny tsipika miolaka sy ny lokon'ny fanaka amin'ny endrika sinoa dia miteraka endrika milamina sy milamina. Ny firavaka sy ny ahitra dia manampy atmosfera voajanahary be dia be eny amin'ny habakabaka. Mijanona eny amin'ny habakabaka ny ahi-maitso, ary miala sasatra ao anaty habakabaka ny hatsaran-tarehy, mba hahafahan'ny olona be atao misitraka ny fiadanam-po sy ny fahamaotinana tsy lavitra ny korontana.
Fifandanjana sy filaminana
Ny haben'ny efitrano dite dia lavitra ny faritra hafa, ary ny antsipiriany rehetra dia noforonin'ny mpanao endrika tsara. Hazo, vatolampy, kesika, singa maritrano taloha, ny fampiasana efamira sy faribolana mora volavola, ny fitambarana sy ny fampifangaroana ny loko tatsinanana, ny famaritana tsy manam-petra momba ny Atsinanana fahiny dia voasokitra mandrakariva eo amin'ny habakabaky ny mpamorona.
Ny faritry ny rano dia manohy ny fomba ankapobeny, miaraka amina bara marbra lehibe sy loko hazo milamina, ny endrika tsotra dia feno hatsaran-tarehy ethereal, izay ahazoana aina sy mahafinaritra. Mihantona eny amin'ny habakabaka ny jiro perla, toy ny kintana eo amin'izao rehetra izao, sahala amin'ny sary kanto mamiratra.
Fanehoana tsiro klasika fomba fiteny vaovao
Ny fitenenana madio dia matetika mahitsy amin'ny fo. Ny mpamorona dia mamoaka ny singa an'ny crane ary manao fandikana vaovao amin'ny endrika sy ny asany. Eo amin'ny sehatry ny tontolo iainana, andiana vano mitafo eny amin'ny habakabaka, miseho sy manjavona, toy ny hoe nandia fotoana an'arivony taona izy ireo ary namela soritra eto.
Amin'ny alàlan'ny varavarankely fitaratra, mianjera amin'ny rindrina sy sofas ny tara-pahazavana, ary mivoaka sy mamakivaky ny habakabaka ny olona, ​​mamorona sary hosodoko mirindra. Ao amin'ny sary hosodoko, mangina sy mangina ireo kintana, miova ny hazavana sy ny haizina mifanaraka amin'ny fiposahan'ny masoandro sy ny filentehany ary manidina manodidina ny lanitra ireo vanoano. Ny asa be vava ataon'ny mpamolavola isan'andro dia namorona toerana mandanjalanja sy milamina, toerana manintona ara-panahy.
"Kely no betsaka", sarotra ny endrika, fa tsotra ihany koa. Ny kely dia tsy ny hanakana ny faniriana, fa ny hanala ny haingo tsy misy dikany ary hiverina amin'ny fangatahana mihitsy. Ao amin'ny faritra fifampiraharahana lalina dia mampiasa teknikan'ny famolavolana voadio ny mpamorona hivezivezy eo anelanelan'ny realisme sy ny realisme, mamorona firavaka kanto sy ara-panahy any atsinanana.
Anaran'ny tetikasa. Ivotoerana Marketing any Wanten-Guanshan Yue
Famolavolana sy fampiharana malefaka ｜ Milo Reflections
Talen'ny zavakanto ｜ Yazhen Zhang
Toerana ｜ Chenzhou, Hunan
Faritra tetikasa ｜ 680㎡
Misaotra manokana ｜ Wanten Hongyu Real Estate
Milo Reflections dia marika hatsarana malefaka manome haitao avo lenta. Izy io dia mifantoka amin'ny fanomezana lalindalina, feno sy matihanina avo lenta amin'ny famolavolana fanaka malemilemy sy serivisy fitobiana vokatra ho an'ny toerana toa ny trano tsy miankina manokana, trano fandraisam-bahiny, efitrano fandraisam-bahiny, birao fivarotana ary klioba hotely. Hatramin'ny nananganana azy dia namorona efitrano velona tsara tarehy marobe teto amin'ny firenena izy ary nanolo-tena ho marika voalohany amin'ny famolavolana fanaka malefaka any Shina.
Milo Reflections dia mandray ny "famolavolana manangana ny kanton'ny fiainana" ho idealy tsara tarehy, mandray ny mpanjifa ho ivon-toerana, manaja ny tena filàna sy ny fihetseham-po mety hitranga amin'ny olona ary ny ontology eny amin'ny habakabaka, manome ny toerana misy ifandraisany mahaolona, ​​mampita fomba fiainana tsara ary mahatonga ny asa rehetra samy manana ny mari-pana sy ny sandany.
Previous :: Biriky maitso sy tsanganana mena, ny fanehoana zavakanto ny maritrano nentin-drazana│IN.X Volavola Next: Drafitra efitrano fisakafoanana malaza 80 izay manazava ny aingam-panahin'ny endrika!
2021 / 08 / 15 5501
2021 / 08 / 14 5526